Resources talagalay soo-galeetiga
Bishan aynu informaros mid ah waxyaabaha:
1. Waxaan ku daray afar beelood Isbaanish warbixin ku saabsan meelaha ay tahay in aad tegi kartaa wax kuu sheego ama si aad u barato Isbaanish for free.
Afarta gobol yihiin:
Andalusia, Cantabria, Valencia iyo Castilla-León
Kuwan aad hore u leeyihiin 9 bulshooyinka khaanadda midige!
2. Inmigramob waxa uu abuuray a codsiga mobile si xor ah u bartaan Isbaanish “sida, goorta iyo halka aad doonayso” by web. Cibaaro waa in codsigan waa waxtar u leh dhammaan noocyada kala duwan ee telefoonada gacanta, waxay u baahan yihiin ma noqon “Smart”.
Waxay sidoo kale bixiyaan Casharo Isbaanish Free isticmaalaya codsiga in:
Seville, Gargaarka Centre iyo Qaxootiga Welcome, C / relator, 6, sida: 954 619 164
Dos Hermanas, Dhaqanka Center of Montequinto, C / barakiciyay ay s / n, Metro Europe
Wixii macluumaad dheeraad ah: info@inmigramob.com
Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah, Waxaan halkan yihiin!
Published in: Ismaamul beeleedka, News
Tags: Koorsooyinka , Daraasad Isbaanish , News , khayraadka madaxa Banaan Bulshooyinka